10 astaamood oo ah koox isku abaabulaysa agile
Ugu Weyn Ee Kacsan 10 Astaamaha Kooxda Is-abaabulka Agile
Mid ka mid ah dhinacyada muhiimka ah ee muhiimka ah ee qaab dhismeedka Agile ayaa leh koox is-abaabusha. Tan waxaa sidoo kale lagu xusay Agile cad :
' Naqshadaha ugu fiican, shuruudaha, iyo naqshadaha ayaa ka soo baxa kooxaha is-abaabula '
Kooxo is-abaabula, sida magaca ka muuqata, waxay qaadaan mas'uuliyad waxayna maareeyaan hawlahooda gaarka ah hana ku tiirsanayn qabaal si ay ugu sheegaan waxay samaynayaan.
Aan aragno sida koox isku-abaabulka Agile u egtahay:
Lahaanshaha Guud ahaan kooxdu waa koox shaqsiyaad bisil oo qaata dadaallada una shaqeeya naftooda oo aan sugin in hoggaamiyahoodu shaqo u dhiibo. Tani waxay xaqiijineysaa dareenka weyn ee lahaanshaha iyo ballanqaadka.
Dhiirigelin: Dhiirigelinta kooxdu waa furaha guusha. Xubnaha kooxdu waa inay diiradda saaraan oo ay xiiseeyaan shaqadooda.
Wadashaqeyn: Kooxdu waxay maarayn kartaa shaqadooda marka loo eego qoondaynta hawsha, qiyaasta hawsha, horumarinta sheekada iyo tijaabinta iyo gudbinta orod guul leh koox ahaan. Waa inay u shaqeeyaan koox ahaan halkii ay ka ahaan lahaayeen koox shaqsiyaad ah. Wada shaqeynta waa la dhiiri galiyay.
Tababarida: Kooxda ayaa loo daayay inay sameeyaan waxa ay kufiican yihiin - gaarsiinta softiweerka - laakiin wali waxay ubaahan yihiin heer heer hagitaan iyo tababar iyo fududeyn ah oo ay sameyso ScrumMaster, laakiin uma baahna 'amar iyo xakameyn.'
Aaminaad iyo ixtiraam: Xubnaha kooxdu way is aaminaan oo is ixtiraamaan. Waxay aaminsan yihiin lahaanshaha koodhka wadajirka ah iyo tijaabinta waxayna diyaar u yihiin inay u sii socdaan masaafada dheeriga ah si ay midba midka kale uga caawiyo xallinta arrimaha.
Ballanqaad: Isgaarsiinta iyo shakhsiyaadka ugu muhiimsan ee dadaalka badan ayaa muhiim u ah kooxda is abaabusha ee Agile. Xubnaha kooxdu wax badan ayey is-gaarsiiyaan, waxayna si buuxda uga go'an tahay inay shaqadooda u gutaan si shaqsi ah iyo koox ahaanba. Waxaa jira xaflado kala duwan oo loo yaqaan 'Scrum' sida kulanka taagan ee maalinlaha ah, qurxinta sheekooyinka iyo isku dheelitirnaanta, taas oo dhiirrigelisa wadahadallada kooxda.
Wadashaqeyn: Kooxdu waxay fahamsan tahay in si guul leh loogu gaarsiiyo softiweerka, waa inay fahmaan shuruudaha oo aysan ka baqin inaad weydiiso su'aalo si shaki looga muujiyo. Wadashaqeyn joogto ah Mulkiilaha Alaabta waa lagama maarmaan.
Aqoonta: Shakhsiyaadka waxay u baahan yihiin karti u leh shaqada ay hayaan. Tani waxay sababi doontaa kalsooni shaqadooda waxayna baabi'ineysaa baahida loo qabo jihada kore.
Horumar: Si joogto ah u hagaajinta xirfadahooda isla markaana kula taliya fikradaha cusub iyo hagaajinta.
Sii socosho: Koox cusub ayaa muddo qaadaneysa si ay u bislaadaan oo ay iskood isu abaabulaan. Waqtiga dheeriga ah, waxay fahmi karaan dhaqankooda shaqo koox ahaan, markaa beddelaadda halabuurkeeda markasta iyo ka dib ma caawinayso. Waxaa ugufiican in xubnaha kooxdu wada shaqeeyaan mudo macquul ah.
Abuuritaanka koox is-abaabusha Agile ma aha hawl fudud oo waxay qaadataa waqti macquul ah si loo sameeyo. Badanaa, ScrumMaster waa inuu tababbaraa oo uu fududeeyaa mid ka mid ah maaddooyinka kor ku xusan si looga caawiyo si dhakhso leh ula socoshada sameynta kooxo is-abaabulaya oo Agile ah.
muxuu u wajahayaa kooxdu?
sida loo qoro si loo xareeyo java
Falanqaynta Xasaasiga ah iyo Falanqaynta Dynamic ee Tijaabinta Barnaamijka
Maxaa Maareeyayaasha QA Loogu Baahan Yahay Mashaariicda Agile
Sida loo Gudbiyo Foomka Xogta ee REST-la xaqiijiyay ee Codsiga Boosta
Sida loo rakibo JMeter Qalabka Dheeraadka ah ee Mac OS adoo adeegsanaya HomeBrew
Maxay Yihiin Noocyada Kaladuwan ee Hackers?
Sida loo Isticmaalo Brew si loogu rakibo Java-ga Mac